Home Wararka Maanta Sawirro: Yaa kusoo baxay doorashada kuraasta HOP#025 iyo HOP#081?
Sawirro: Yaa kusoo baxay doorashada kuraasta HOP#025 iyo HOP#081?
Magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug waxaa maanta lagu qabtay doorashada kuraas ka mid ah xubnaha Golaha Shacabka Soomaaliya ee ay deegaan doorashadoodu tahay deegaanada maamulkaasi.
Doorashada oo lagu bilaabay kursiga HOP#025 ayaa waxaa isku soo taagay laba musharrax oo kala ah Maxamed Abuukar Cali (Jacfar) oo ah guddoomiyaha maamulka degmada Dayniile iyo Xasan Cali Cismaan oo mar dambe isaga tanaasulay tartanka.
Jacfar oo loo qaaday cod gacan taag ah ayaa ku guuleystay kursiga HOP#025, wuxuuna helay codad gaaraya 100, sida uu shaaciyey guddiga doorashada.
“Waxaa ka tanaasulay tartanka Xasan Cali Cismaan waxaa ergadu hab gacan taag ah ugu codeeyeen musharax Mohamed Abukar Cali (Jacfar) waxaana ogol ugu codeeyey 100 ergada ah, waxaa maya ku codeeyey 1 ergo ah, wax ka aamusay majiraan. Sidaa daraadeed waxaa ku guuleystay doorashada kursi HOP#025 Mohamed Abukar Cali (Jacfar) oo helay 100 cod,” ayuu yiri gudiga doorashada Galmudug oo shaaciyey natiijo hordhac ah.
Sidoo kale kursiga labaad ee HOP#081 oo ay horey ugu fadhisay Maryan Cariif Qaasim ayaa waxaa kusoo baxday Marwo Cadar Cali Maxamed ( Shalaqbeen) oo heshay 71 cod, waxaa iyadana u tanaasushay Nasro Maxamed Dalabey oo kula tartami laheyd kursiga.
Kuraastan ayaa qayb ka ah doorashaada xubnaha Baarlamaanka kasoo galaya dhinaca dowlad goboleedka Galmudug, gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb.
Si kastaba, doorashada Golaha Shacabka ayaa la filayaa in lasoo gabagabeeyo ka hor 25-ka bishan, iyadoo kadib la dooran doono guddoomiyeyaasha labada aqal ee Baarlamaanka.